musha Europe Akasanganiswa Maartist Ciryl Gane Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Yedu Ciryl Gane Biography inokuudza chokwadi nezvenyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Amai, Baba (Romain Gane), Mhuri, Rudo Hupenyu. Kunyanya zvakadaro, mukwikwidzi weFrance mukwikwidzi weVanun'una, Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro uye mambure akakosha.
Kuti tiite nyaya refu ipfupi, tinokupa iwe mufananidzo wakazara weiyo Hupenyu nhoroondo yaCiryl Gane, musanganiswa wemasoja anokwikwidza muboka reheavyweight reUltimate Fighting Championship.
Yedu Biography inotanga kubva panguva yake yekuzvarwa kusvika ave zita reimba mukati meOctagon.
Kuti urodze kufanana kwako kweBiography yedu, isu tinopa magalari nzira yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwaCiryl Gane. Pasina mubvunzo, mifananidzo yaunoona pasi apa inopfupisa nhoroondo yehupenyu hwake.
Ciryl Gane Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva pakutanga basa kusvika Kubudirira kwake.
Hongu, isu tinomuziva kuti auye nemusiyano mutsva weMuay Thai muUltimate Fighting Championship muchikamu cheheavyweight.
Kunyangwe kurumbidza kwake, isu tinoziva kuti vateveri vashoma chete ndivo vakaverenga chidimbu cheCiryl Gane's Biography.
Naizvozvo, isu takazviona zvakakodzera kuti tikushandire iwe inonakidza nyaya yaCiryl Gane uye nekuputsika kweakafaira chiitiko kusvika zvino. Zvino, pasina kumwe kunonoka, ngatitangei.
Ciryl Gane yehucheche nyaya:
Pakutanga, ane zita remadunhurirwa rekuti - Bon Gamin. Ciryl Jacky Gane akazvarwa musi we 12th waApril 1990 kuna amai vake nababa, Romain Gane, mutyairi webhazi.
Nhoroondo yedu yeFrance yakazvarwa muLa Roche-sur-Yon, mumoyo weVendee, France, achangoteera mukoma wake, David Gane. Ciryl Gane nevanun'una vake vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake nababa, Romain Gaine.
MuFrench musanganiswa wekurwa angangodaro aine musoro semwana. Saka, Ciryl Gane aiwanzonzi "Bon Gamin" achiri mwana, achishandura ku "mwana akanaka" muchiFrench.
Kusiyana nevamwe vatambi veMMA, rudo rwaCiryl Gane kuMMA haruna kumera pakutanga kwehudiki hwake. Pane kudaro, aifarira nhabvu uye basketball.
Kunyangwe aine tarenda rake remitambo, wechidiki chap akashandawo mukutengesa kuchitoro chemidziyo. Sezviri pachena, akangowana shungu dzake dzekurwa gare gare muhupenyu hwake.
Kusangana kwaakaita nemutambo wescuffling kwaive kuburikidza neshamwari yake. Mumwe aimbova mukirasi make akasuma Ciryl Gane kuna Muay Thai.
Dzimwe nguva dzinonzi tsiva, Muay Thai ihondo uye mutambo wehunyanzvi. Mutambo unobatanidza kushandiswa kwezvibhakera, mabvi, magokora uye kupenya. Nekudaro, ichiita hunyanzvi hwemakumbo masere, Ciryl Gane akawana kugona.
Vechikoro vemunharaunda vana vanoratidza muay Thai.
Ciryl Gane Mhuri Yemhuri:
Pane imwe nguva muhupenyu hwaCiryl Gane, aifanira kuita mabasa akaderera kuti abatsire kuriritira mhuri.
Vabereki veVatambi veFrance vaive varombo, vachinetsekana kuti vawane chouviri. Apo baba vaCiryl Gane, Romain Gane, vakanga vari mutyairi webhazi, amai vake vaitarisira musha.
Ciryl Gane Mhuri Kubva:
Achitaura nezvemidzi yake yemhuri, Ciryl Gane anobata nyika yeFrance. Akazvarwa munharaunda diki muPays de la Loire, kumadokero kweFrance, inozivikanwa saLa Roche-sur-Yon.
Nekudaro, baba vake ndeveGuadeloupean dzinza. Nekudaro, parutivi nerudzi rweFrance, senge vamwe vazhinji vanobva kuGuadeloupe, Ciryl Gane ane dzinza reCaribbean.
Guadeloupe inzvimbo yezvitsuwa uye nedhipatimendi rekunze kwenyika nenharaunda yeFrance muCaribbean. Iyo nharaunda ine zviwi zvitanhatu. Pazasi pane kuratidzwa kwemifananidzo yemhuri yaCiryl Gane.
Chiratidziro chemifananidzo yemhuri yaCiryl Gane.
Ciryl Gane Bio - Ekutanga Basa Nyaya:
Asati apinda muMMA, Ciryl Gane mukwikwidzi weNational Muay Thai. Akaita basa rake rekutanga mu2016, muAFMT (Académie Française de Muay Thaï) Muay Thai heavyweight zita rekurwa naJérémy Jeanne. Iyo jaya chap yakunda nekukota kwechipiri-kutenderera.
Kunze kwezvose izvo, Ciryl Gane ndiyewo mutambi asina kukwana weMuay Thai ane rekodhi yebasa re12-0.
Iyo French Nationale yakasangana naFernand Lopez panguva iyoyo, uyo akamusuma uye akamudzidzisa MMA.
Mufananidzo mushure mekuita kwake kwenyanzvi muna 2016, muAFMT.
Ciryl Gane Dzidzo:
Zvakakodzera kukuyeuchidza nezvemamiriro ake ezvinhu asina kunaka. Saizvozvo, Ciryl Gane anofanira kunge akapinda chikoro cheveruzhinji munharaunda yekumadokero kweFrance kwaakakurira.
Paaiva kuchikoro aiita mitambo yakasiyana-siyana, kunyanya nhabvu nebasketball.
Mushure mezvo, pakati pekurwa kwemhuri, Ciryl Gane akapinda muchirongwa chebasa-rekudzidza muParis. Akaenda kuburikidza nezvidzidzo zvakafanana, achiwana degree reBTS mukutungamira. Aive waaidzidza naye kubva kuzvidzidzo zvake uyo akaunza Gane kuna Muay Thai.
BTS ndiyo diploma yeAdvanced Technician, inonzi "Brevet de technicien supérieur" (BTS) muchiFrench. Iyi yemakore maviri post-sekondari nyika degree rehunyanzvi.
Ciryl Gane Biography - Mugwagwa unoenda Mukurumbira:
Kunze kweizvozvo, Gane akapinda muMMA kekutanga muna 2018, achiita kutanga kwake muna Nyamavhuvhu 2018.
Sezviri pachena, Gane aive nemakwikwi akabudirira kuTKO Heavyweight Championship achipesana naBobby Sullivan. Iwo epamusoro emutambo anogona kuoneka muzvikamu pazasi.
Mutambo uyu wakaitika muMontreal, Quebec, Canada. Ciryl Gane akabuda akakunda nekuzviisa mumutambo wekutanga kuburikidza nekukachidzwa kumberi.
Zvakare, asati atamira kuUFC, Gane aive nemitambo mitatu muTKO, kusanganisira kutanga kwake. Mitambo mitatu yese yaive kukunda kwake.
KuTKO Heavyweight Championship kurwisa Bobby Sullivan.
Ciryl Gane Biography - Simuka kune mukurumbira:
Mutambi ane tarenda akaita mukurumbira wake muUFC muna2019.Mutambo uyu waipesana naRafael Pessoa, kwaakanyora kukunda kwake kwekutanga kweUFC. Gane akakunda neruoko-katatu kukachidzwa pakupera kweround rekutanga.
Kutevera nekukasira neakateedzana ehondo kwaakagashira Performance yeiyo Husiku Mubairo.
Nehurombo, muna 2020, Ciryl akatambura kukuvara nekuda kwekurohwa paPneumothorax yake panguva yekudzidzira.
Saka nekudaro, aifanira kubuda mumutambo weUFC 249 2020. Akarongerwa kurwisa Shamil Abdurakhimov. Mukupesana, iyo hondo yakagadzirwazve mana kana kusvikira yazomiswa.
Imwe yemaitiro ake ekuronga ndeye ruoko-kona katatu kukachidzwa.
Mushure mekupora kwake, muUFC 256, akakunda Junior Dos Santos uye mumwe achipesana naJairzinho Rozenstruik.
Zvakadaro zvakare, Gane akatarisana naAlexander Volkov musi we 26th waJune 2021 paUFC Fight Night 190. Akakunda kuburikidza nechisarudzo chisina kubvumirana.
Panguva ino, Ciryl akatora chikamu mumitambo ye9 senyanzvi yeMMA mumhanyi uye akakunda mune yega yega.
Maitiro ake eMMA musanganiswa weMuay Thai uye Kickboxing. Vhidhiyo iri pasi apa inoratidza kusimuka kwake kwakasimba uye kusingagumi.
Kubudirira kwake kwakauya paakatarisana Derrick Lewis pazuva rechinomwe raAugust 7 reIntimendi UFC Heavyweight Championship. Kukunda kwaCiryl Gane pamusoro paDerrick Lewis kwaive kwakakura kupfuura kungori zita.
Nhau dzakanaka ndedzekuti akahwina iwo-mativi scuffle kuburikidza nehunyanzvi knockout mumativi matatu. Mutambo wakamupa iye Performance yeiyo Husiku mubairo. Ona zvakadaro zvakakwidziridzwa zvemutambo mune clip iripazasi.
Ciryl Gane Kufambidzana ndiani?:
Panguva ino, hazvisi nyore kuratidza mamiriro ehukama hwake. Isu hatizive Ciryl kuti ave kufambidzana chero naani zvake.
Anogara ari single kwenguva yakati rebei. Bon Gamin, sezvinowanzodanwa, akaisa pfungwa dzake dzose pakuvaka basa rake reMMA reunyanzvi.
Kunyangwe kana paine waanoona chero munhu, akaita basa rakanakisa rekuzviita muchivande. Nekudaro, runyerekupe rune kuti mushure mekubudirira kweUFC Heavyweight, akazivisa kuzvarwa kwemwana se'kukunda kwechipiri. '
Ciryl Gane akazivisa kuberekwa kwemwana se 'kukunda kwechipiri.'
Ciryl Gane Hupenyu Hwemhuri:
Hatidi kurerutsa kupa kwaamai vaCiryl Gane nababa, Romain Gane. Vabereki vake vaigara vachitsigira uye vakaita zvavanogona kuti vaone kuti mukwikwidzi wemitambo ane tarenda akabudirira.
Pamusoro pazvo zvose, pfungwa yake yokuisa ngwariro inofanira kuva yakabva pamipiro yokuzvipira yenhengo dzeimba yake. Zvino, ngatitarisei zvakadzama nhengo imwe neimwe yeimba yayo.
Nezve Ciryl Gane Baba - Romaine Gane:
Tinomuziva somunhu ane hanya uye anoshanda nesimba. Saka, kuti vawane chokurarama nacho, baba vaCiryl, Romaine Gane, vakapinda mukutyaira Bhazi.
Nekudaro, zvisati zvaitika, aivewo Mutambi. Akatamba nhabvu yenhabvu kwechinguva kuDivision d'Honneur.
Baba vaGane, Romaine, vaivewo neboka rechitanhatu reBhora nhabvu repiramidhi. Iye wedzinza reGuadeloupeans. Kufambisa kwake kuenda kuLa Roche-sur-Yon kwaive kuwana hupenyu huri nani iye nemhuri yake.
Nezve Ciryl Gane Vabereki - Amai:
Mudzimai uye amai vanotsigira zvikuru, haana kumbozengurira kuratidza rudo kumwanakomana wake ane tarenda, Ciryl.
Apo murume wake, Romaine Gane, akaenda kubasa. Aitarisira imba, achizadzisawo zvakawanda zvezvido zvepfungwa zvaCiryl Gane.
Nekudaro, isu tinofungidzira kuti zita rake rinobviswa nekuda kwezvikonzero zvinonyanya kuzivikanwa kune weIntim UFC Heavyweight Champion, Ciryl Gane.
Nezve Ciryl Gane Siblings:
Sezvaunofanirwa kunge wakaona, mukati menyaya yedu, hapana zvakawanda zvinotaurwa nezveVanin'ina vake.
Zvakanakisisa zvatinoziva ndezvekuti Ciryl Gane ane mukoma mukuru anonzi David Gane. Kana aine vamwe vanun'una, isu hatisati tazivana navo. Nekudaro, pazasi pane mufananidzo waDavid Gane.
Mufananidzo wehama yaCiryl Gane mukuru.
Nezve Ciryl Gane Hama:
The American Interim UFC Heavyweight Champion anofanira kunge aine dzimwe hama.
Ciryl Gane ane vashoma vemhuri yake yakakura kunze kwevabereki vake, sababamukuru, vanamainini, nasekuru nasekuru. Kunyange zvakadaro, hapana chatinonzwisisa nezvavo.
Chimwe chezvinhu zvakasarudzika zvemutambo waCiryl tsoka dzake. Gane nemoyo murefu anotora mapfuti ake, asingachinjike masisitimu. Iye anototaridza kunze nguva dzeumhanyi kupenya pese paanosvetuka kumusoro kumusoro nemabvi ake anobhururuka.
Sezvineiwo, kunze kweOctagon, anoburitsa hunhu hwakasarudzika. Zvingangodaro kuti rimwe zita rake, Bon Gamin, zvinoreva kuti munhu anonzwisisa anomutevera.
Nekuda kweizvozvo, kuwana mukurumbira uye ari kugamuchira rudo kubva kune vateveri vake pasi rese.
Ciryl achisimbisa yake yakasarudzika yekubatirira maitiro - tsoka.
Uyezve, Ciryl Gane anotora mukana wesocial media kuvhara gaka nevateveri vake vanogara vachimutsigira.
Yake Instagram account chete ine vateveri ve300k. Anogovanisa mapikicha kubva pakudzidziswa kwake, zvimedu zvemutambo wake, uye zvigadziriso zviri kuuya. Gane haagoverane zvakawanda nezvehupenyu hwake hwega.
Uye zvakare, iyo Yechinguva UFC Heavyweight Champ inoda kutamba, kushanda kunze kwekurovedza muviri, uye kuenda kuzororo. Moreso, anofarira kutandara neshamwari, kukwira makomo uye kukwira makomo.
Iye anofarira kutandara neshamwari, kukwira makomo uye kukwira makomo.
Ciryl Gane Mararamiro:
Pasinei nekuzvininipisa uye kuzviziva pachake mavambo ake, Ciryl Gane zvino anorarama hupenyu hwakanaka.
Panguva ino yehupenyu hwake, anokwanisa kutenga chero mota dzepamusoro kubva kuFerraris kuenda kuMcLarens nePorsches kuenda kuLamborghinis nedzimba dzinodhura. Tarisa pamufananidzo weimwe yemota dzake pazasi.
Mufananidzo waGane neBlack Cherokee Jeep yake.
Mukukurukurirana nepepanhau reFrance L'Equipe, Ciryl Gane anoburitsa chikwama chake cheUFC 265 wepakati heavyweight zita kuhwina pamusoro paDerrick Lewis.
Anoburitsa pachena kuti pamberi pemitero, bhegi rake raive $ 350,000. Kune rimwe divi, mushure memitero, akachekwa timu yake, uye shanduko yemari, anoenda kumba anenge madhora mazana masere nemasere.
Uye zvakare, kune Performance yeiyo Husiku bhonasi, iye anowana madhora zviuru makumi mashanu, kusanganisira $ 50,000 sechikamu cheUFC Promotional Guidelines Kuteerera kubhadhara.
Nekudaro, Gane anonzi anowana anovimbiswa $ 400,000, ane $ 100,000 bhonasi yekukunda, uye anogona kuwana imwe $ 300,000 zvichibva pakutengesa kwePPV.
Saka nekudaro, muhoro wake, maererano nemitambo yekubhadhara, inenge madhora mazana mashanu ezviuru. Zvinoenderana nemitambo yakakosha, mambure ake anokosha sa2021 ari madhora mazana matanhatu emadhora.
Kana zviri zvibvumirano zvake, Ciryl Gane anotsigira DFNS Sneaker uye Apparel Care, rudzi rwe eco-hushamwari.
Iye, nekuwedzera, anotsigirwa neGymking, iyo inopa Gym merchandise. Mukubatana, tamuona achishambadza Myprotein, pre-Workout shake uye Natura Force.
Iyo Champ inoratidza yake pre-Workout zunza.
Ciryl Gane Untold Chokwadi:
Kunze kweruzivo rwataurwa pamusoro, pazasi pane mashoma anonakidza echokwadi angafadza fancy yako.
Chokwadi # 1: Ciryl Gane naFrancis Ngannou Ukama:
Ciryl Gane imwe nguva yekudzidzira mudiwa we # 1 UFC heavyweight mukwikwidzi Francis Ngannou. Ivo vaviri pakutanga vakasangana paMMA Factory muParis, pasi pemurairidzi Fernand Lopez. Ivo vaviri vakasangana pakutanga kwemabasa avo.
Ivo vaviri havadzidzi pamwechete pamwe chete sezvavaimboita nekuda kwaNgannou anogara muLas Vegas. Kunyangwe hazvo Gane naNgannou vasisiri vekudzidzisa vamwe, vanoramba vari shamwari.
Panguva yese iyi, Fans vanoramba vachinetseka kuti Gane naNgannou vachazosangana nguvai mukati meOctagon kana mukana wacho ukazviratidza. Inguva chete ndiyo ichaudza. Mukupesana, kubatanidza zita rinorema mune ramangwana, Ciryl achasangana naFrancis Ngannou. Mutambo uyu unenge uri mukurusa wake.
Mufananidzo une hushamwari waCiryl Gane naFrancis Ngannou.
Chokwadi # 2: Gakava muJDS (Junior dos Santos) kurwa:
Nekukurumidza kutevera Ciryl Gane's 2nd round knockout kukunda pamusoro peaimbove shasha Junior dos Santos, "Cigano" akapikisa mhedzisiro uye akataura kuti kurova kwekupedzisira kwakawira kumashure kwemusoro.
Mazuva mashoma mushure mechiitiko ichi, dos Santos akatumira pa Instagram, achiratidza maonero ake pakumiswa. Kushushikana kwaDos Santos kunogamuchirwa, tichifunga kuti ari parutivi pabasa rake. Dzimwe nguva, varwi vane nguva yakaoma yekugamuchira ivo vasisiri kuita padanho ravakamboita.
Pano, gokora rakagadzwa naCiryl Gane raive repamutemo, uye pane zero mukana wekuti kukunda kwake kuchapidigurwa kumakwikwi asina. Gane akakunda Junior dos Santos zvakaringana uye zvakaenzana.
Gane akakunda Junior dos Santos zvakaringana uye zvakaenzana.
Chokwadi # 3: Nezve iyo tattoo pagumbo rake:
Ciryl Gane akagovana zvinorehwa kumashure kwetatoo pagumbo rake. Akafumura kukosha uku achitaura muUFC 265 vlog. Akataura kuti zvakanyorwa 'Bon Gamin' ipfungwa.
Zita rinoratidza Kugara uri mudiki uye kuita izvo zvaunoda kuita. Zvakare, izwi iri rinoreva Kuramba uchizvininipisa uye zvine musoro. Nekudaro, Ciryl Gane ane shungu kwazvo pamusoro pehunhu hunotevera zita remadunhurirwa.
Ciryl Gane anogovera iyo tattoo pagumbo rake.
Chokwadi # 4: Charity:
Mukuenderera, senzira yekupa iyo nzanga yakamuumba, Gane inosanganisira mune yekuzvipira kudzidziswa. Kungofanana neFrench MMA iri kutora, zvinotora nyanzvi kudzidzisa varwi vatsva. Nekudaro, iye anoshanda mukudzidzisa, manejimendi uye manejimendi manejimendi eMMA muFrance. Kutenda kuFight Management College.
Mufananidzo paKurwa Management Koreji.
Iyo UFC inorema chikamu inotaridzika kwazvo mumakore. Kwechinguva, mafeni vakaratidza kunetseka kwavo nezvekushaikwa kwevechidiki tarisiro mukirasi yekurema. Zvisinei, naCyril Gane, muna 2021, harisisiri dambudziko.
Zvishoma nezvishoma, kunyangwe kana iwe usingakwanise kupfuura zvese zviri pamusoro, shandisa tafura iri pazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezve iyo French MMA superstar.
Zita rizere: Ciryl Jacky Gane
Zita rekudanwa: Bon Gamin
Zuva rekuzvarwa: 12th Zuva raApril 1990
Nzvimbo yekuzvarirwa: La Roche-sur-Yon, Furanzi
Mudzidzisi: Fernand Lopez
Vabereki: Romaine Gane (baba)
Hanzvadzi konama: David Gane
Muhoro: $ 500,000 (2021)
NaCyril Gane, muna 2021, nyaya yekudiwa kwetarisiro haisisiri dambudziko.
Mukuvhara Ciryl Gane's Biography uye Yehucheche Hupenyu Nyaya, Tinovimba wakadzidza zvishoma zvidzidzo. Kunyangwe Ciryl Gane's isiriwo nhoroondo sarudzo yekupinda muMMA kukakavara, kutarisisa kwake, kutsunga, uye basa rakaoma zvave zvinobatsira.
Hazvishamise kuti vanhu vangani vanotarisira kwaari kukunda muhondo yake naFrancis Ngannou. Kunyange, vamwe, vakadai Daniel Cormier, anotenda zvakasimba kuti Jon Jones anounza matambudziko mazhinji kuna Ciryl Gane paheavyweight uye kwete Ngannou.
Nyaya yehupenyu hwake inokurudzira kune vese vadiki uye vanoda-kuve nyeredzi. Hapana chinhu pasi pano chinofanirwa kukwanisa kutsausa munhu kubva pakutevera kurota kwavo. Kunyangwe kumashure kwake hakuna kuita senge. Nekudaro, iko kuguma kwataurwa kunoruramisa nzira. Ciryl Gane ikozvino anopa mazano kune vamwe vanhu.
Tinotenda kuti iwe wawana izvi kunyora-up zvinofadza zvinonakidza, uye zvinonakidza. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neepamusoro-notch mhando.